Iimpawu ezikude kwi-Post-Production-NAB Bonisa iindaba nge-Broadcast Beat, uMsasazo osemthethweni we-NAB Show - NAB Bonisa LIVE
ikhaya » Ulawulo lokuqukethwe » Iimpawu ezikude kwi-Post-Production
Iimpawu ezikude kwi-Post-Production
OpenDrives Ulungelelaniso lweeNkqubo zokuSebenza koPhuculo olwandisiweyo
Inzuzo engenakukhunjulwa yokusasazwa ngokusasazwa ngokukhawuleza. Ingxaki yodwa kukuba imveliso yokusebenzela emveli emva kokuvelisa eyona nto ifanelekileyo kwimveliso yezobugcisa ayiyona ndlela efanelekileyo kakhulu yokwenza oku kwenzeke ngeemeko ezibukho ziindawo ezinkulu. Ukususela kumbono wobugcisa bokusebenza, ukusabalalisa ukusasazwa kwezithuthi njengoko kwenzekayo kusetyenziswa izixhobo ezisetyenziswayo kunye nokutya okunomxholo kubaphulaphuli kunye nantoni okanye ukungabikho kwongezwa okongezelelweyo kwemisebenzi yesikhokelo (emva kokuhlela okanye ukulungiswa kombala). Nge-post-production ihamba phambili kwixesha lexesha lokubambisa ukufumana umxholo, ukwenza umsebenzi ofunekayo okanye wokufundwa kwithuba emva kokuvelisa, kunye nokugcinwa kwakhona kwimixholo ngokukodwa ukusabalalisa ngaphantsi. Ngendlela yokusebenza kakuhle kunye neziseko ezixhasayo, nangona kunjalo, sinokunciphisa kakhulu ukuba ixesha lokuphumla kwithuba.
I-OpenDrives ithathe inxaxheba kwimicimbi ethile yakutshanje esenza umngeni wethu ukuququzelela enye imveliso yokuphumla kwemveliso yezithuba zempilo. Kwi-BlizzCon ngasekupheleni kwe2018, sasinceda ukuqhuba enye yezona zinto zandisekayo kwiimeko eziye zanceda ukunciphisa ukungaphumeleli kokungena kwempahla, eyayiyi-Post Hub eyenza ukuba kube lula ukuhamba kwemisebenzi emva kokuvelisa. Kunokuba zonke izigaba zenze i-post-production yazo ngokwahlukileyo kwimida, zonke izigaba ezondla umxholo-njengezithethi zesondo-zibe kwiHhovisi eliphambili elixhaswa yi-OpenDrives isisombululo se-NAS esiphezulu se-NAS kuquka i-OpenDrives Inkqubo ye-Apex kunye ne-OpenDrives Summit system hybrid. Abahleli abangabikho kwi Post Post basebenze kwiziko elikhulu elinomxholo okhoyo kwi-OpenDrives storage, benza umva wokuvelisa emva kweso siganeko phambi kokusasazwa kokugqibela kwiindawo ezininzi ezahlukeneyo.
Kwi-Grammys yonyaka, sasebenzisa izixhobo ezizenzekelayo kwindawo kwaye sathumela konke ukubuyela kwisixhobo esinezixhobo ezine apho zonke izixhobo zikhoyo. Ngale ndlela, ukuveliswa kwempahla kungashukunyiswa, ngelixa ukugxininiswa kokusebenza kwenzelwe kwakhona kwiziko. Olu phuhliso lomsebenzi lwaluyindleko eninzi ngelixa liqinisekisa nokusebenza okuphezulu, ukugqithisa, kunye nentembeko yedatha. Zonke iirekhodi kunye nee-VOD zigcinwe kwi-system ye-OpenDrives Apex system, eyona ndlela isisombululo sethu esiphezulu se-ultra-performance. Ukuqwalasela ifolda ngokuzenzekelayo kwathatha ezo fayile kunye neziqhotyoshelweyo ezilungiselelwe ngaphambili kunye ezilalelwayo "iintloko kunye nomsila" kubo. Emva kokuhlanganiswa, ukuhanjiswa komsebenzi kwaxininisa ezi fayile kwifomathi yefayile ekhutshweyo kwaye wabathumela ukusuka kwindawo kwiStaples Centre ngaphaya komgca wolwazi ozinikezele kwiziko lase Marina del Rey. Ngeli xesha, abahleli baxhaswa, benza i-QC kunye nokupasa kokugqibela, baphumelela naziphi na izilungiso, baza bahambisa umxholo ngeendlela ezahlukeneyo kunye neziphelo, njengewebhu ye-Grammys. Kwakuyimxube epheleleyo ye-teknoloji, ukuzenzekelayo, kunye nokulungiswa komntu.
Iziganeko zangoku zifana ne-NBA zokugqibela, i-US Open (i-Fox Sports), senze usebenze oluthe xaxa ngenxa yokunciphisa ixesha lokumisa. I-US Open ngoku iqhube i-OpenDrives ukuthola iifayile ze-10 ze-720P DNX100 iirekhodi zekhamera (ezibandakanya iVenice, iRED, ne-F55) eza kubahleli be-5 nabaphathi beendaba ze-2. Inkundla ye-4x10Gbps ibetha i-OpenDrives kwi-400MB / s kwisitoreji. Sisebenzise izisombululo zethu zokugcina kwimiba yeeyure, kungekhona iintsuku. Nangona kukho lula ukuseta, izisombululo zethu zokugcina ziqinisekisile izinga eliphezulu lokwenziwa komsebenzi kunye nokugqithisa ukuxhasa izidingo zalezi ziganeko eziphilayo xa kulungele ukusebenza okusebenzayo emva kokuveliswa kwemveliso ukuze kwenziwe imali yokwenza umxholo ophuma kuwo.
OpenDrives Umvangeli weVangeli
Umhleli weVidiyo - Septemba 22, 2019
Umyili wemveliso / Umyili wemveliso - Septemba 22, 2019
Ilungu leqela lesitrato - Septemba 22, 2019
Mamela i-Aurora Health Campaign / i-Colonie Injineli yokusasaza Ukusasazwa kwezobunjineli Ukusasazwa-iMedia Media Ukusasazwa kwezeNtlalo Ukusasazwa-SocialMeida Cobalt Encoder ukuhlela UGraham Chapman uVikelelwa kuMhleli SJGolden - Iintetho kunye nemisrya IColonie I-Colonie - Iindaba IKOLONIE / Chicago TVU Networks Injini yeVidiyo	2019-06-14
Previous: I-Areia Indalo ivelisa i-KPOP Music IiVideos nee-Blackmagic Design ikhamera, i-Blackmagic RAW kunye ne-DaVinci Resolve
next: Ukunika amandla i-Most Captivating Webcasting Workflows ne-Matrox® Monarch EDGE